Akon’ny fitsidihana sekoly nataon’ny MEN tany amin’ny faritra Atsimo andrefana: “Maro ny fanatsarana ny tontolon’ny fampianarana”. – Depeche TARATRA
Accueil/Social/Akon’ny fitsidihana sekoly nataon’ny MEN tany amin’ny faritra Atsimo andrefana: “Maro ny fanatsarana ny tontolon’ny fampianarana”.
Akon’ny fitsidihana sekoly nataon’ny MEN tany amin’ny faritra Atsimo andrefana: “Maro ny fanatsarana ny tontolon’ny fampianarana”.
Ny ministra Sahondraharimalala Marie Michelle nikabary tao Sakaraha
Fanolorana tables banc vaovao tao Sakaraha (MEN)
“Latabatra fianarana miisa 60.000 no hamboarina sy haparitaka manerana ireo fianarana manerana an’i Madagasikara ho fanatsarana ny tontolon’ny fianarana”,
Nisongadina ihany koa ny nilazan’ny ministra ny fampitokisana nomen’ny filoha Andry Rajoelina ny hampitomboina ireo mpampianatra ho lasa mpiasam-panjakana vaovao ka hisitraka izany mialoha amin’ity taona ity ireo izay manana marim-pahaizana CAE/CAP. Namporisihin’ny ministra manokana ny fandraisan’anjara ireo mpampianatra manana io mari-pahaizana io amin’ny fisoratana anarana.
Efa voamarika ara-pomba ofisialy tao anatin’ny tatitry ny filakevitry ny ministra farany teo ny fiantohana ara-bola ny FEFFI sy ny fampiakarana ny teti-bola hoentina hiantohana ny “caisse école” manerana ny nosy; fantratra ary izao fa raha 204 ny isan’ ireo “cantines scolaire” amin’izao fotoana izao dia hiakatra ho 3.000 latsaka izany manerana an’i Madagasikara.
Raha iray hetsy (100.000) ny ankizy nozaraina sakafo teo anivon’izany cantines scolaire izany amin’izao fotoana izao dia hiakatra 5 hetsy mahery izany aoriana ary hiatomboka amin’ity taona ity ny tetik’asa.
Ireo no santionan’ny akon’ny fitsidihina ifotony tanterahin’ny minisitry ny fanabeazam-pirenena, Sahondraharimalala Marie MIchelle, tany amin’ny faritra Atsimo andrefana nandritry ny kabariny tany an-toerana ny 13 septambra teo.
Mariages précoces : accentués par la crise sanitaire
Retrait des pensions à la sous-caisse de Mahitsy
Fampianarana ara-teknika : hanome fiofanana manaraka kalitao no tanjona
SyNU: “WearAMask2021” challenge